लिपु लेक हस्तान्तरण : प्रत्यक्ष प्रसारण
बिराटनगरमा डिजेल बरामद
घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गदै गृह मन्त्री थापालाई काग्रेस सोलुको ध्यानकर्षण पत्र
नेकपा (ओली समूह)सोलुखुम्बुको अध्यक्षमा बास्तोला सचिबमा राई
मैले आज आफ्ना सम्पूर्ण कामहरूलाई ‘मुलतबी’ मा राखेँ । मेरो नजर टेलिभिजनका पर्दाहरूमा नै केन्द्रित छन् । आज हरेक टेलिभिजन च्यानल प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न व्यस्त छन् । महान् एवं असल मित्रराष्ट्र भारतद्वारा कथित अतिक्रमण गरिएको भनिएको नेपाली भूभाग लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आज नेपाललाई सहृदय, सहज एवं सहर्ष हस्तान्तरण गर्दैछ । त्यही हस्तान्तरण समारोहलाई दुवै देशका टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछन् ।
अहो, भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू त कति शिष्ट, सभ्य र नम्र रुपले नेपालप्रति प्रस्तुत भएका । हरेकजसो टेलिभिजन च्यानलले नेपालको प्रशंसामा बहुमूल्य शब्दहरू खर्च गरिरहेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको भावनामाथि कुनै–कतै कोणबाट चोट पुग्ला कि भनेर ती टेलिभिजन च्यानलहरू अत्यन्तै सजग देखिएका छन् । बरु, ‘टिआरपी’ शून्यमा नै किन नझरोस् तर छिमेकीको भावनामा एक अंश पनि चोट नपुगोस् भनी हरेक समाचार–सामग्री प्रसारण गर्दा अत्यन्तै सचेत रहेको पाएँ ।
न चिच्याहट, न अनर्गल गाली, न कुनै लान्छना । अहाँ, छिमेकीका टेलिभिजन च्यानलहरूमा आएको आमुल परिवर्तनले म द्रवीभूत बन्न पुगेँ । आखिर, ती च्यानलहरूमा सुधार आउनै पथ्र्यो । नसोचेको ढंगले सुधार आएको देख्दा म अपार खुसी र गद्गद् हुन पुगेँ । एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानलतिर नजर पु¥याएँ, एक जना प्रस्तोता विनम्र स्वरमा भन्दै थिए, ‘भारत ने महान् उदाहरण प्रस्तुत किया है । आज एक समारोहों के बीच हमारा प्राइमिनिस्टर ने लिपु लेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा हस्तान्तरण कर रहा है । ये बहुत खुसी के बात है । भारत ने अपना पडोसी देशहरू से असल सम्बन्ध सुधार मे कदम उठा रहा है ।’
नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थिए । एउटा टेलिभिजन च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने क्रममा भन्दै थियो, ‘अब हामी तपाईँलाई गुञ्जीतिर लैजाँदै छौं, जहाँ हाम्रा सम्वाददाता हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका छन् ।’
(टेलिभिजनमा केही दृश्यहरू आउँछन्, झल्याकझुलुक । दुइटा पहाडको खोचमा बसेको एउटा सुन्दर बस्ती । त्यो बस्तीका एउटा खुला चौरमा भव्य मञ्च बनाइएको छ । मञ्चको चारैतिर नेपाल–भारतका झण्डाहरू फर्फराइरहेका छन् । केही मानिसहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका देखिन्छन् ।)
‘नमस्कार, म अहिले दार्चुला जिल्लाको गुञ्जीमा उभिएर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु । अबको केही घन्टापछि यो ठाउँमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदै छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरू आइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई आज लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हस्तान्तरण गर्दैछन् । अब म केही स्थानीय बासीहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु ।’
(टेलिभिजनका सम्वाददाताले एक जना स्थानीयबासीतिर माइक सोझ्याउँछन् ।)
‘हजुर मेरो नाम लाक्पा हो । हामी यो ठाउँमा पहिलादेखि नै बस्दै आइरहेका छौं । मेरो बाजेको पालादेखि नै हामी यहाँ बस्दै आएका हौं । आज यो ठाउँ नेपालले फिर्ता पाउँदै छ भन्दा मलाई धेरै खुसी लागेको छ । हामीलाई आफ्नो माटो फिर्ता गर्ने भारत महान् देश हो । हामी नेपालीहरू भारतीय सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।’
(माइक अर्को व्यक्तितिर सोझिन्छ ।)
‘नमस्कार, मलाई खासै बोल्न त आउँदैन । तर, आज यो ठाउँमा भारतका प्रधानमन्त्री आउने र नेपालको प्रधानमन्त्री पनि आउने र हाम्रो भूमि हामीले नै पाउने कुराले म धेरै खुसी भएको छु । यो काम भारतले पहिला नै गर्नुपथ्र्यो । तर, ढिलै गरे पनि राम्रै काम गरेको छ । भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै आएकोमा हामी खुसी छौं र भारतको यस्तो व्यवहार सधैँ कायम रहोस् भन्न चाहन्छु ।’
टेलिभिजन–सम्वाददाताले क्यामरा एउटा विन्दुतिर सोझ्याएँ, जहाँ लेखिएको थियो, ‘नेपाल–भारतबीचको मित्रता सधैँ कायम रहोस् ।’ उनले अझ मञ्चतिर क्यामरा सोझ्याए, जहाँ दुवै देशका नागरिकहरू मञ्चलाई अझ व्यवस्थित र झकिझकाउ तुल्याउन व्यस्त देखिन्थे ।
मैले फेरि भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू हेर्नका निम्ति रिमोट समातेँ । कहिले भारतीय, कहिले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू हेर्दै म व्यस्त भइरहेँ । एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानल फलाक्दै थियो, ‘बुद्ध के महान् भूमि, विश्व के सर्वोच्च धुरी सगरमाथा, सीता, भृकुटीका महान् देश नेपाल से हम प्रत्यक्ष प्रसारण मे…।’ अहो, नेपालको बारेमा यति धेरै प्रशंसा त बरु नेपाली टेलिभिजनहरूले नै गर्दैनन्, भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले कुनै कन्जुस्याइँ नगरी प्रसारण गरिरहेको देख्दा म त नतमस्तक नै बन्न पुगेँ ।
एकाध घन्टापछि गुञ्जीको आकाशमा केही हेलिकप्टरहरू घुम्न थाले । बिस्तारै–बिस्तारै हेलिकप्टरहरू गुञ्जीमा बसे । त्यसमध्ये एउटामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चढेका रहेछन् । नेपाली प्रधानमन्त्री ओली पुग्नुभन्दा अगावै मोदी पुगेका हुन् । अहो, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न कति हतार भएको हो ? नेपाली प्रधानमन्त्रीभन्दा कति छिट्टै पुगेका हुन् ?
करिब १५ मिनेटपछि नेपाली प्रधानमन्त्री ओली सवार हेलिकप्टरले पनि गुञ्जीमा अवतरण ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओली हेलिकप्टरबाट ओर्लिने बित्तिकै मोदी आफ्ना समकक्षी ओलीलाई लिन हेलिप्याडसम्मै पुगे । दुवैले अँगालो मारे । कोरोना–सोरोनाको कुनै पर्वाह नगरी केही क्षणसम्मै दुवै देशका प्रधानमन्त्री अँगालोमा बाँधिए । कस्तो भावुक क्षण । यस्तो भावुक क्षण विरलै आउँछन् । म पनि कताकता भावुक बन्न पुगेछु ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्री मञ्चमा उक्लिए । सुरुमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्य दिए । नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले एक असल, इमानदार र विशाल छाती भएको छिमेकी पाएका छौं । लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग हो भनेर हामीले दाबी ग¥यौं । हामीले ती भूभागहरूसमेत समेटिएको नक्सा संसदबाट पारित ग¥यौं । हामीले गलत दाबी गरेका थिएनौं । आखिर, आज भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट ती भूभागहरू हामीलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ । यो अवसरमा म महान् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र सबै भारतीय जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
अब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बोल्ने पालो । माइकसामु पुगेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विनम्रतापूर्वक शिर झुकाए र भने, ‘म आज हिन्दीमा नभई नेपालीमै बोल्न चाहन्छु ।’
एक पटक पूरै परिवेशलाई गुञ्जायमान तुल्याउँदै ताली बज्यो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सुरुमै भने, ‘म पूरै क्षमा चाहन्छु । लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आजैबाट म तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु ।’
मोदीले फेरि भने, ‘हामीले लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा आफ्नो दाबी गर्दै आएका थियौं । तपाईँहरूले पनि आफ्नो दाबी गर्दै आउनुभएको थियो । तपाईँहरूले त यी भूभागहरूलाई समेटेर नक्सासमेत निकाल्नु भयो । नक्सा त हामीले पनि निकालेका थियौं । तर, नक्सा निकालेर मात्र केही नहुँदो रहेछ, प्रमाणहरू चाहिँदा रहेछन् । प्रमाणहरूले नबोलेपछि हामीले यी भूभागहरू आफ्नो भनी दाबी गर्नु बेकार रहेछ भन्ने लाग्यो । यी भूमिहरू नेपालकै रहेछ भन्ने हामीले प्रमाणहरूबाट थाहा पायौं । त्यसैले हामीले अहिलेसम्म दाबी गर्दै आएकामा म क्षमा चाहन्छु र आजैदेखि म तपाईँहरूलाई लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हस्तान्तरण गर्दछु ।’
ताली केही समयसम्मै बजिरह्यो । उता मञ्चमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । ओलीको हाँसोमा भारतीय समकक्षी मोदीले पनि साथ थिए र उनी पनि मुसुमुसु हाँस्न थाले ।
प्रत्यक्ष प्रसारण आइरहेको छ, म टेलिभिजन हेर्न व्यस्त छु ।
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका प्रबेशद्वारको चिण्डो अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड
नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ जहाज ‘फेवा’ आईपुग्यो
समायोजन भएका कर्मचारीलाई देशभर बढुवाको अवसर, सरुवामा बन्देज
अखिलले देशभरिका क्याम्पसमा राष्ट्रिय झन्डा फहरायो